Eksaody 24 - Ny Baiboly
Eksaody toko 24
Famaranana ny fanekena - Moizy tao an-tendrombohitra.
1Ary hoy Andriamanitra tamin'i Moizy: Miakara aty amin'ny Tompo hianao sy Aarona. Nadaba sy Abio, ary loholona fito-polo amin'Israely, ka mbola lavitra dia miankohofa. 2Moizy irery no hanakaiky an'ny Tompo, fa ireo hafa tsy hanakaiky; ary ny vahoaka tsy hiara-miakatra aminy.
3Dia tonga Moizy, nitondra tamin'ny vahoaka ny tenin'ny Tompo rehetra sy ny lalàna rehetra, ka indray niredona ny vahoaka ka namaly hoe: Izay teny rehetra voalazan'ny Tompo dia hotanterahinay avokoa.
4Nosoratan'i Moizy avokoa ny tenin'ny Tompo. Dia nifoha maraina koa izy, nanorina otely teo am-pototry ny tendrombohitra sy nanangana tsangam-bato roa ambin'ny folo ho an'ny fokon'Israely roa ambin'ny folo. 5Ary naniraka zatovolahy zanak'Israely izy, ka nanolotra sorona dorana tamin'ny Tompo ireo sy namono ombalahy hatao sorom-pisaorana. 6nalain'i Moizy ny antsasaky ny rà nataony teo amin'ny tany, ary ny antsasany nararany teo ambony otely. 7Izay vao nalainy ny bokin'ny fanekena ary novakiny teo anatrehan'ny vahoaka, izay namaly hoe: Hataonay sy hoekenay avokoa izay rehetra voalazan'ny Tompo. 8Dia nalain'i Moizy ny rà, nafafiny tamin'ny vahoaka sy nolazainy hoe: Ity no ràn'ny fanekena nataon'ny Tompo taminareo momba izany teny rehetra izany.
9Niakatra Moizy, nomban'i Aarona sy Nadaba ary Abio mbamin'ny fito-polo lahy tamin'ny loholon'Israely, 10ary nahita ny Andriamanitr'Israely izy ireo: teo ambanin'ny tongony dia nisy toa zavatra voavoatra natao tamin'ny safira mamirapiratra, zavatra mangarangarana toy ny lanitra. 11Tsy naninjitra ny tànany tamin'ireo olom-boafidin'ny zanak'Israely izy: dia nahita an'Andriamanitra ireo, ka nihinana sy nisotro.
12Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Miakara aty amiko eto an-tendrombohitra ka mijanòna eo, fa homeko anao ny vato fisaka, ny didy aman-dalàna nosoratako hampianarina azy ireo. 13Dia niainga Moizy nomban'i Josoe mpanompony, nandroso nankeo an-tendrombohitr'Andriamanitra. 14Hoy izy tamin'ireo loholona: Andraso eto izahay, mandra-piverinay aty aminareo. Ary indreo Aarona sy Hora eto aminareo, ka raha misy manana ady dia aoka hanatona azy ireo.
15Niakatra tao an-tendrombohitra Moizy, ary nosaronan'ny rahona ny tendrombohitra. 16Nipetraka teo an-tendrombohitra Sinaia ny voninahitry ny Tompo ka saron'ny rahona io nandritra ny henemana. Tamin'ny andro fahafito dia nantsoin'ny Tompo Moizy, tao anatin'ny rahona. 17Toy ny afo midedadeda teo an-tampon-tendrombohitra no fisehon'ny voninahitry ny Tompo tamin'ny zanak'Israely. 18Niditra tao anatin'ny rahona Moizy, dia niakatra tao an-tendrombohitra, ka nijanona teo an-tendrombohitra efa-polo andro sy efa-polo alina Moizy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1099 seconds